Sharaxaad kooban oo Fikirka iyo Hadafka ah - The Word Foundation
Qeex kooban oo ku saabsan Fikirka iyo Dajinta
Sharraxaad kooban oo ku saabsan fikirka iyo aayaha
Maxaad ugu muhiimsan tahay nolosha?
Haddii jawaabtaadu ay tahay in la gaaro faham aad u ballaaran naftaada iyo adduunka aan ku nool nahay; haddii ay tahay in la fahmo sababta aan halkaan u joogno dhulka iyo waxa na sugaya geerida kadib; haddii ay tahay in la ogaado ujeeddada dhabta ah ee nolosha, noloshaada, Fikirka iyo Dareenka waxay ku siinaysaa fursad aad ku hesho jawaabahan. Iyo qaar kaloo badan.
Bogagaan dhexdooda, macluumaad ka weyn taariikhda la duubay ayaa hadda adduunka loo ogeysiiyay — oo ku saabsan miyir-qabka. Qiimaha weyn ee tani waa inay naga caawin karto inaan si fiican u fahamno nafteena, caalamka. . . iyo wixii ka dambeeya. Buugani maahan caqiido kuu sheegi doonta sida aad ugu noolaan lahayd noloshaada. Qoraagu wuxuu sheegay in cashar muhiim u ah nin iyo naag kasta ay tahay inuu qofku go’aansado naftiisa waxa la qabanayo iyo waxa aan la samayn. Wuxuu yiri: “Uma maleynayo inaan qofna u wacdiyo; Aniga iskuma arko inaan ahay wacdiye ama macallin. ”
In kasta oo shaqadan weyn loo qoray binu-aadmiga oo dhan, haddana in yar oo dunida ah ayaa laga helay. Laakiin mawjadaha ayaa isu beddelaya iyada oo inbadan la raadiyo si loo fahmo macnaha caqabadaha shakhsi ahaaneed iyo kan caalamiga ah ee aan wajahayno, iyo sidoo kale xanuunka iyo dhibaatada inta badan la socota. Rabitaankii qoraa ee qoraaga ayaa ahaa Fikirka iyo Dareenka u adeega sidii nal beero si ay uga caawiyaan aadanaha oo dhan inay is caawiyaan.
Akhristaha baadi-goobka ah ee wax baadha iyo qofka raadinta aqoonta aadka u dheer caawimaad kama heli karo laakiin waa la xiiseeyaa tirada, baaxadda iyo faahfaahinta maaddooyinka lagu soo qaatay buuggan. Dad badan ayaa la yaaban sida qoraagu u helay macluumaadka. Qaabka aan caadiga ahayn ee loo sameeyay soosaarahaan ayaa lagu sharaxay Qoraaga Qoraalka iyo ereyga 'Afterword'.
Waqtigu wuxuu bilaabay inuu sharaxo cutubyada Fikirka iyo Dareenka khibradaha soo socda ee iftiinka awoodda, kaas oo uu ku tilmaamay mid miyir qaba. Wuxuu cadeeyay in feejignaanta miyirku ay u muujiso "waxa aan la garanaynin" qofka feejigan. Khibradahaani waxay u ogolaadeen Percival inuu hadhow helo aqoonta ku saabsan mowduuc kasta qaab gaar ah oo diiradda lagu saarayo, ama waxa uu ugu yeedhay "fikirka dhabta ah."
Qoraalka Percival wuxuu ku jiraa wax run ah maxaa yeelay waa mid aan lahayn fikir, aragti ama wax iska hor imaad. Ballanqaadkiisii ​​aan sugnayn ee qaabka ugu sareeya ee runta waligiis kama tanaasulo. Kani waa buug ka hadlaaya himilada qof kasta oo qalbigiisa bini aadamka ah si loo ogaado sababta aadamuhu sidan yahay. Fikirka iyo Dareenka waa khudbad aan caadi aheyn oo hadalhaynta ah oo ku saabsan guud ahaan dunnida muuqata iyo kuwa aan muuqan; sidaas oo kale, waxaa loo adeegsan karaa nolosha dhammaan kuwa hela farriinta xoraynta.
Word Foundation, Inc. | Daabacayaasha Fikradaha iyo Dareenka
Dooro LanguageAfrikaansAfsoomaaliAzərbaycan diliBahasa IndonesiaBahasa MelayuBasa JawaBasa SundaBosanskiCatalàCebuanoČeština‎ChichewaCorsuCymraegDanskDeutschEestiEnglishEspañolEsperantoEuskaraFilipinoFrançaisGaeligeGàidhligGalegoHarshen HausaHmongHrvatskiIgboisiXhosaÍslenskaItalianoKiswahiliKreyol ayisyenLatviešu valodaLietuvių kalbaMagyarMalagasyMalteseNederlandsNorsk bokmålŌlelo HawaiʻiO‘zbekchaPolskiPortuguêsRomânăSesothoShonaShqipSlovenčinaSlovenščinaSuomiSvenskaTe Reo MāoriTiếng ViệtTürkçeYorùbáZuluΕλληνικάБеларуская моваБългарскиҚазақ тіліКыргызчаМакедонски јазикМонголРусскийСрпски језикТоҷикӣУкраїнськаՀայերենქართულიአማርኛיידישעִבְרִיתاردوالعربيةسنڌيفارسیكوردی‎پښتوनेपालीमराठीहिन्दीবাংলাਪੰਜਾਬੀગુજરાતીதமிழ்తెలుగుಕನ್ನಡമലയാളംසිංහලไทยພາສາລາວဗမာစာ한국어ភាសាខ្មែរ日本語简体中文繁體中文